Ny bokotra hijerena ireo fanavaozana Android dia tsy mandeha | Androidsis
ny Ny finday Android dia manana fomba mora hahafantarana raha misy fanavaozana noho ny bokotra fanamarinana ny fanavaozana. Amin'izany fomba izany, rehefa tsindrio ny bokotra dia afaka mahita isika raha misy misy na tsia. Noho izany dia ampidinintsika sy apetraka amin'ny fitaovantsika. Na dia, toa somary hafa ihany ny zava-misy, toa izany misy ny tsy fahombiazana amin'ny rafitra.
Elliott Hughes dia injeniera Google izay nilaza fa tsy nahomby ny bokotra fanavaozana ary amin'izao fotoana izao dia tsy mandeha izy. Ilay toe-javatra niseho iray volana lasa izay. Ary koa, toa mbola mila miandry vahaolana tonga isika.
En Tamin'ny volana septambra dia nisy bibikely tao amin'ny bokotra fanavaozana, izay soa ihany fa voavaha. Nefa telo volana taty aoriana dia miverina ihany ny toe-javatra mitovy amin'izany. Ho fanampin'izany, toa amin'ity tranga ity dia hiandry ny taona 2018 isika vao ho tonga ny vahaolana.
Toa izany, araka ny fanamarihan'ny injeniera Google, tamin'ny fanavaozana ny tsy fahombiazan'ny rafitra Google update ny fanovana dia natao tamin'ny Google Play. Ireo fanovana ireo dia nahatonga ny safidy tompon'andraikitra amin'ny fampidinana ireo kinova OTA tsy mandeha. Mety hisy izany mpampiasa izay tsy nahazo fanavaozana mandritra io fotoana io. Raha izany no izy, ny loharanon'ny olana dia izao.
Amin'izao fotoana izao tsy fantatra hoe hafiriana no niasan'ity lesoka ity. Tsy fantatra koa hoe mandra-pahoviana no hanomezana vahaolana. Voalaza fa ho tonga amin'ny taona 2018 izy io, na dia tsy betsaka aza ny zavatra nambara momba izany. Ka izany no olana tsikaritra ho an'ireo mpampiasa android.
Bibikely matotra io, na dia ny vaovao tsara aza dia ny ankamaroan'ny mpanamboatra dia mampiasa ny rafitra fanavaozana ny OTA. Midika izany fa tsy miankina amin'ilay ampiasain'i Google izy ireo. Ka azo inoana fa tsy misy fiantraikany aminao ny tsy fahombiazana ary afaka mandray ireo fanavaozana ara-dalàna ianao. Ho an'ny tompony misy Pixel sy Nexus Tsy misy antony tokony hanahy ihany koa, satria efa namboarina tamin'ireo fitaovana ireo ny bug.
Fa amin'izao fotoana izao ny finday rehetra miankina amin'ny rafitra fanavaozana Google dia voakasik'ity olana ity. Anisan'ireo voakasik'izany ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » fiarovana » Jereo ny bokotra fanavaozana ny vaovao farany amin'ny Android sasany
Motorola handefa fanontana voafetra Star Wars Moto Mod